Paon d’Or Ivato: Sinoa 2 maty nisy namono Aller au contenu
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Paon d’Or Ivato: Sinoa 2 maty nisy namono Rechercher Valider	Paon d’Or Ivato: Sinoa 2 maty nisy namono Imprimer	Tsy fantatra na inona na inona ny antony fa dia maty nisy namono tao amin’ny efitrano nipetrahany tao amin’ny hotely Paon d’Or eny Ivato ny teratany Sinoa miisa 2. Omaly maraina vao hitan’ireo mpiasa ao anatin’ity trano fandraisam-bahiny ity ny razana efa nangatsiaka. Ny fanadiadiana natao moa no nahafantarana fa ny alin’ny alakamisy hifoha omaly zoma no nisy namono ireto Sinoa ireto izay sendra nandalo tao amin’ity trano fandraisam-bahiny ity. Hatramin’ny omaly hariva dia mbola tsy voasambotra ny tompon’antoka tamin’izao vonon’olona izao fa mbola eo am-panoavana famotorana tanteraka ny borigadin’ny zandary eto Antananarivo Renivohitra izay nandray an-tanana ny raharaha. Sambany moa hatramin’izay nisian’ity trano fandraisam-bahiny ity no nisy ny tranga tahaka izao. Tsara ny manamarika fa Sinoa no tompon’ny toerana ary betsaka ny teratany Sinoa miasa ao anatin’io hotely io. Tsy fantatra raha mety ho resaka valifaty ve no anton’ny famoanoana sa zavatra hafa mihitsy. F.Tsihiavonana